Jaamacadda Qaranka ee Dhaqaalaha Kharkiv - Study in Ukraine
Jaamacadda Qaranka ee Dhaqaalaha Details Kharkiv
gaabinta : KhNUE
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Qaranka ee Dhaqaalaha Kharkiv
Codso in Jaamacadda Qaranka ee Dhaqaalaha Kharkiv
Jaamacadda Qaranka ee Dhaqaalaha harkiv waa hay'ad waxbarasho gobolka sare ee heerka ugu sareeya IV ee aqoonsiga, waa hoos timaada wasaaradda waxbarashada iyo Science of Ukraine.
Maanta Kharkiv University Qaranka ee dhaqaalaha waa hay'ad keentay khaas sare waxbarasho ee Bariga Ukraine, kaas oo bixiya kala duwan oo ay ka buuxaan adeegyada waxbarashada fulinta tababarka multistage, kuwii horeba iyo tababar dheeraad ah, waayo, ku takhasusay 26 gaarka ah laamaha sida aqoonta
Dhaqaalaha iyo Ganacsiga;
Maamulka iyo Maamulka;
Aqbaarta iyo Engineering Computer;
Publishing iyo Daabacaadda Business;
Categories gaar ah.
University waa ruqsad oo ka mid ah Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska, Dhalinyarada iyo Isboortiga ee Ukraine diyaarinta muwaadiniinta Ukraine oo ajnabi ah imtixaanada laga galo in hay'adaha waxbarashada sare (taxane liisanka АЕ No. 458586 from28.07.2014).
Waxaa jira 7 Caqlina, 34 waaxyaha, Qoraalo iyo Distance Learning Center, Xarunta waxbarashada Post-Graduate, golayaasha tacliinta khaaska ah ee difaaca theses for qaata shahaadada cilmiga ah ee Doctor ama Musharaxa of Science in dhaqaalaha, laboratories waxbarashada iyo sayniska-cilmi, xarunta computer ah, maktabad cilmiyeed iyo farsamo, guriga daabacaadda, kaxeynayo isboortiga ee Jaamacadda.
Lahaanshaha aragnimo badan ee tababarka ardayda Ukraine, KhNUE saamaysaa HR, sayniska, siyaasadda farsamo iyo dhaqaale ee shirkadaha iyo ururada dalka warshadaha. Mabda'a hagaya waxqabadka KhNUE waa formation of aqoonyahanada caqliga dhaqaalaha ee dalka. Si loo gaaro yoolkaas University ee fuliya diyaarinta dhaqaaleyahannada aadka xirfadeed aqoon u leh macluumaadka teknoolajiyada casriga ah iyo model cusub ee dhaqanka.
Developed nidaamka University waxbarashada joogto u adeegta fulinta go'aanda kor ku xusan. Maanta nidaamka this ka wakiil yahay dhismaha sayniska iyo waxbarashada, taas oo ka mid ah pre-doorashada ee codsadayaasha awood iyo iyaga tababar, koorsooyinka taagan iyo waraaqaha, sidoo kale tababar iyo kuwii horeba ee ku takhasusay ee isreebreebka sare. Waxbarashada dugsiyada sare abuuray kulliyadaha ardayda waxay leeyihiin fursad gudahood si aad u hesho qaas ah ee la xiriira qiimo la dhimay.
Jaamacadda ayaa aasaasay nidaam dabacsan ee maamulka tayada diyaarinta of takhasuska, ku salaysan la socodka joogtada ah ee guulaha qalin KhNUE '.
KhNUE firfircoon fulisaa heerarka waxbarashada, taas oo ka shaqeeya dalalka of Community Yurub. Dhismaha tababarka iyadoo la raacayo mabda'a “midoobidda foomka (simayo koorsooyinka) - Asalnimada ee content (buuxintii of modules ah)” u ogolaanaya in ay fuliso faa'iidooyinka KhNUE in habka ugu fiican ee. Faa'iidooyinka The la xidhiidha heerka sare ee horumarinta shaqada sayniska iyo cilmi-baarista iyo is-dhexgalka leh habka waxbarashada iyo dhaqanka dhaqaalaha. Ka qayb cilmi sayniska waa in ay u sameeyaan takhasus ah dano la hab hal abuur leh si uu shuqulka, oo waa kan kara si ay u xalliyaan hawlaha, taas oo ka dhaqan dhaqaale casriga kac.
S. Kuznets KhNUE taageertaa links ballaaran oo caalami ah hay'adaha waxbarashada sare ka iyo waddamada deriska ah shisheeye la ujeedada tababarku, kuwii horeba iyo horumarinta xirfadeed oo khaas ah; Ururka hawlaha cilmi wadajir ah, sarrifka ardayda, ardayda post-graduate ah iyo macalimiinta, diyaarinta mashaariicda wadajir ah inay ka qayb qaataan deeqaha tartanka. S.Kuznets KhNUE leedahay wada-hawlgalayaasha ka mid ah jaamacadaha ajnabiga ah iyo hay'adaha waxbarashada ka dalal badan, kuwaas oo ka Austria, France, Russia, Belarus, Shiinaha, Italy, Armenia, Germany, Poland, Czech Republic, Canada, USA iyo kuwo kale. waafaqsan ee Jaamacadda in heerarka waxbarasho oo casri ah ayaa la xaqiijiyay in ay martiqaad si ay ugu biiraan Charta Magna ku Universitatum - ururada jaamacadaha haybadda leh ee dunida la xarunta magaalada. Bologna (Italy) - September 18, 2004.
The ardayda KhNUE heli doonaan fursad ay ku qaataan tababar ku keentay shirkadaha warshadaha qaran, dhaqaale, talinta iyo shirkadaha kale. Iyadoo waxbarasho, ardayda ay helaan tababar luqadda ee koorsooyinka guud iyo optional, ay bartaan Ingiriisi waxaa laga yaabaa in, Faransiiska, Jarmal, Chinese, Talyaani, Turkish, Carabi, luqadaha Polish.
At ardayda Jaamacadda heli tababarka aasaasiga ah, kaas oo u ogolaanaya iyaga inay sameeyaan iyo hirgelinta go'aannada wax ku ool ah spectrum ee arrimaha dhaqaalaha casriga ah, oo ay ku jirto doorashada ee alaabta tartan, qiimeynta waxtarka mashaariicda maalgashiga iyo heer farsamo iyo urur ee wax soo saarka, horumarinta istiraatijiyadda horumarinta ee shirkadu, qorshaynta hawlaha, ururka ee wax soo saarka iyo shaqada, cilmi marketing, falanqaynta dhaqaale oo qoto dheer, iwm.
KhNUE qalinjebisey ah si guul leh u bixiyaan baahida HR of keentay dadweynaha, Shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo stock wadajirka ah ee dalka, ay u shaqeeyaan in machadyada sayniska iyo cilmi-baarista iyo goobaha waxbarashada sare, bangiyada iyo hay'adaha maamulka gobolka, in shirkadaha dalxiiska iyo ganacsiga yaryar oo celcelis ahaan gudbikaraa adeegga, hubinta hawlaha caalamiga ah, waxay qorsheeyaan iyo kaabayaasha design of shirkadaha, magaalooyinka, gobollada.
habka Admission ee Jaamacadda Qaranka ee Dhaqaalaha Kharkiv
Wixii khuseeya University Qaranka ardayda shisheeye Dhaqaalaha Kharkiv u leeyihiin in ay codsan online via Center Admission Ukraine.
Kuliyada Consulting iyo Ganacsiga Caalamiga ah
Department of Business International iyo Falanqaynta Dhaqaalaha
Department of Higher Xisaabta iyo dhaqaalaha iyo Methods Xisaabeed
Department of Dhaqaalaha iyo Hantida Assessment of Enterprises
Department of Control iyo Audit
Department of Philosophy iyo Cilmiga Siyaasadda
Department of Management Financial Services
Kuliyadda Maamulka iyo Suuq-
Department of Management iyo Ganacsiga
Department of Economics, Organization iyo Qorshaynta ee Activity Enterprise The
Department of Economics iyo Suuq
Kuliyada Dhaqaalaha Aqbaarta
Department of Cybernetics Dhaqaalaha
Department of Technology, Ecology iyo Ammaanka ee Activity oo Muhiim ah
Department of Systems Computer iyo Technologies
Department of Aqbaarta iyo Computer Engineering
Department of Statistics iyo saadaasha dhaqaalaha
Kulliyadda Dhaqaalaha iyo Sharciga
Department of Management Shaqaalaha
Waaxda Dhaqaalaha ee Enterprise iyo Maaraynta
Department of Sociology iyo Psychology of Management
Department of Regulation Legal Dhaqaalaha
Department of Public Administration iyo dhaqaalaha gobolka
Kuliyada Dhaqaalaha Relations International
Department of International Dhaqaalaha iyo Management of Activity Dhaqaalaha International
Department of siyaasadda dhaqaalaha
Qeebta Luqadaha Iyo Tarjamada Dibadda
Department of Languages ​​Dibadda
Kuliyada tababarka dadka ajnabigaa
Waaxda of Science Dabiiciga ah iyo Technology
Department of Ukrainoznavstvo iyo tababarka luqadda ee ajaanibta
Department of Education Jirka iyo Sport
Taariikhda University Qaranka ee Dhaqaalaha Kharkiv ay xidhiidh dhow la hay'adaha gaarka ah ee waxbarashada ganacsiga, kaas oo la aasaasay sanadkii Kharkiv lagu jiro kor u kaceen degdeg ah dhaqaale ee dabayaaqadii qarnigii XIX XX -early. Waagaas magaaladuna waxay ahayd xarunta of territory weyn, oo ah magaca rasmiga ah ee semi-South of Russia. In dareenka dhaqaalaha, waxa uu ahaa gobolka warshadaha cusub, halkaas oo waax ka mid ah macdanta iyo warshadaha culus ayaa dynamically soo koraya.
In 1888, at hindisaha of Kharkiv ganacsade baayacmushtariga Ganacsiga Taliyaha M. Orlov Commercial College Kharkiv la aasaasay, waxaa la furay 1893, iyo in 1896 waxaa la siiyey magaca Emperor Alexander III.
In 1912 prof. M. Pavliienko bilaabay hindise cusub oo dadweynaha - Evening Koorsooyinka ganacsiga Higher la furay iskuulka. The aasaasayaasha Koorsooyinka ee madaxa І.Vetlichenko Ganacsiga-taliyaha ayaa sameeyey dadaal badan in la dhiso Dugsiga Sare ee Dhaqaalaha. Shaqaalaha cilmiga iyo manhajka koorsooyinka marka hore la kulmay heerarka sare. Tababarka ayaa xirfadeed oo khaas ah oo duurka ku of commerce, dhaqaalaha maxalliga ah, bangiyada iyo arrimaha dhaqaale lagu qaaday at koorsooyinka, iyo markii ugu horeysay ee Russia - tababar ganacsi oo khaas ah oo loogu talagalay shirkadaha warshadaha ayaa sidoo kale fuliyay waxaa. The ugu horeysay ee Russia takhasusay sayniska iyo urur cilmi «Office of Economic Study of Russia» halkaasuu ku abuuray by prof. P. Fomin. In 1916 Duma State siiyey xaaladda Institute Commercial in Koorsooyinka ah. In 1918 - 1920 a horumoodka Nobel mustaqbalka ee dhaqaalaha Simon Kuznets bartay Institute Kharkiv Commercial.
Inta lagu guda jiro xanafta Times
1920 waa bilowga da'da habeynta Soviet. In 1921 KhCI waxaa magacooda loo baxshay u Institute of Dhaqaalaha Qaranka, iyo, ugu dambeyntii, ee koorsada of dib u habaynta waxbarashada sare ee 1930, waa kala qaybsamay. On ku salaysan kulliyadaha ay halkaas la abuuray machadyada waaxaha hoos jooge waaxeedyada. On October 30, 1930 Kharkiv Engineering iyo Machadka dhaqaalaha waxaa la aasaasay oo ku saleysan ugu weyn ee Waaxda waqti warshadaha. Maanta taariikhda this waxaa si rasmi ah loo tixgeliyaa maalintii aasaaskii KhNUE ah. KhEEI tababaray injineerada iyo dhaqaaleyahannada for warshadaha culus ee Soviet Ukraine. Machadka ahaa caan ah in ay mid ka mid ah waxbarasho ugu horeeysa, xarumaha sayniska iyo cilmi-of Ukraine berrinkii dhaqaalaha warshadaha. The saynisyahano ah Machadka ka qayb qaatay barnaamijyada cilmi on ciidamo of awoodda wax soo saarka ee warshadaha culus ee Ukraine, hordhaca ah ee farsamooyinka kharash-ool ah, isticmaalka hababka casriga ah xisaabta ee qorshaynta ee urur-soo-saarka iyo shaqada, Abuuridda of nidaamka iswada ee maamulka-soo-saarka (Warshadaha Control System).
In 1956 - 1960-mada shaybaarka sayniska iyo cilmi baarista dhaqaalaha ee warshadaha madax prof. The. Lieberman ku shaqeeya ee KhEEI. dalabyo saynisyahano Its 'abuuray by natiijada cilmi-baarista ah ayaa la wareegay saldhig of fikradda guud ee dib u habaynta dhaqaalaha 1965.
Tan iyo dhamaadkii 1980-, Machadka ballaarto kala duwan ee goobaha tababarka ardayda, laga bilaabo tababarka ee ku takhasusay dhaqaalaha ee International, Maaliyadda iyo Banking, maareynta shaqaalaha, iwm. 1994 Machadka la siiyey xaaladda State University of Economics.
In 1990-mada - bilowga ah ee 2000-mada University laftiisa kala duwanaayeen sida hoggaamiyaha waxbarashada dhaqaalaha ee Ukraine, taas oo inta badan ay go'aamiso jihada ay horumarinta.
on August 21, 2004, University la siiyey xaaladda Qaranka.
Ma rabtaa wada hadlaan University Qaranka ee Dhaqaalaha Kharkiv ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Jaamacadda Ummadda Kharkiv Dhaqaalaha on Map
Photos: Jaamacadda Qaranka ee Dhaqaalaha Kharkiv rasmiga ah Facebook
Jaamacadda Qaranka ee Dib u eegidda Dhaqaalaha Kharkiv
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Qaranka ee Dhaqaalaha Kharkiv.
University of National Technologies Cuntada Kyiv